Uthi uzosebenza kakhulu kunakuqala owe-Afro Pop | Eyethu News
Uthi uzosebenza kakhulu kunakuqala owe-Afro Pop
“Usanda kukhipha enye i-album yakhe.”
UMculi we-Afro Pop uScelo Gowane ozokhipha ucwecwe lweVideo yengoma yakhe kuleMpelasonto. Isithombe: Mthandeni Madlala.
UMCULI we-Afro pop uthi kuyena ukukhipha kwakhe ingoma kumenza abenogqozi lokuthi asebenze kakhulu kunakuqala ukufeza umsebenzi wakhe omuhle kulendima.
UScelo Gowana waseNewlands osebe endimbeni yezomculo iminyaka engaphezu kwemihlanu usanda kukhipha ingoma yakhe ethi “Uma Esehamba ” uthi uzimisele ngokuthi kwi-Albhamu yakhe ezophuma ekupheleni kwenyanga uMay kulo nyaka.
Lo mculi uthi kuningi akufundile emculweni ngokubona abaculi befika nomsebenzi omuhle kodwa kuthi elandelayo ishaye udaka.
“Okubalulekile ukusebenza kakhulu kunakuqala ukugcina umsebenzi wakho umuhle ngasona sonke isikhathi ungezwakali umsebenzi wakho uphelelwa Amandla lapho abathandi bomculo wakho bewulangazelele” kusho uGowana.
Uthi izingoma zakhe kule-Albhamu yakhe ezophguma zizoba yi-12 kube nenye ingoma ezoba isengezo kulezi.
Njengoba ethi izobe ijiye ngezingoma kubalwa ethi Ngingumuntu nami,Wenzani,Angidlali,Ibhanoyi nezinye eziningi.
Nakuba uScelo uthi le-Albhamu yakhe athi inongwe ngemicwi ye-Afro-pop, Hip Hop kanye neR&B uthi akakayiniki isihloko ngenxa yokunikeza ithuba abadidiyeli bakhe ukuthi baxoxisane ukuba iliphi igama angalisebenzisa kuyona.
Lo mculi oke wabonakala kweminye yemicimbi emikhulu kubalwa iHezelmere Dam neminye eminingi.
UScelo ongumculi uphinda abengumdidiyeli aphinda abhale uthi konke lokhu kudinga isikhathi futhi nothando lomsebenzi wakho.
Uthakaselwe kakhulu owe-Durban Port Festival